Iimveliso Steel Steel | I-China Iimveliso zentsimbi abavelisi kunye nabaxhasi
ezinye iimveliso zangasese
Iipani zokuchopha kunye nomchamo
Ukubhinqa ngesandla kwensimbi engenasici
Laser ukusika isebenza
Ezinye iimveliso zentsimbi
imisebenzi yobugcisa yesinyithi
Imisebenzi emithathu yentloko yeshawari
Iphaneli yokuhlamba ecoliweyo ezine ...
LED ekhitshini itephu yebala ...
Yophahla ekhwele retangu LED ...
I-LED yentloko yokuhlamba intloko nge ...
Iphaneli yokuhombisa ye-laser cuttig
Ukucaciswa kwenombolo yemodeli CP-SF010 Ukugqiba ukuCoca / ukuCoca Umgangatho kumgangatho okanye udonga olunyusiweyo lweMathiriyeli yentsimbi okanye iMilo yesinyithi engenasici ngokuYilwa kwesitayile seNdalo. Uyilo luphefumlelwe ngumyezo wentwasahlobo. Iintyatyambo okanye iimilo kwipateni zichazwe ngendlela engaqhelekanga ngokusasazwa ngokulinganayo kweepateni ezilula zejometri. Iindidi ngeendidi zeemilo ezahlukeneyo, ezinjengeentyatyambo, iinkwenkwezi, iibhaluni, iintliziyo, amagqabi, iinyawo, njl.
isinyuko isinyithi sentsimbi
Ukucaciswa kwenombolo yemodeli CP-SR002 Ukugqitywa komgangatho ogqityiweyo / ubrashi Umgangatho wangaphandle okanye udonga olunyusiweyo lweMathiriyeli yentsimbi okanye iMilo yentsimbi engenasici ngokobunzima obenziwe ngokobukhulu, ukumelana nefuthe, akukho lula ukuguqulwa. Ukuxhathisa okunganyangekiyo okungangeni manzi nokumelana nokungabikho komhlwa kwindawo efumileyo, ukubanakho amandla okulwa i-oxidation, okomeleleyo kwisicelo sangaphandle sexesha elide. Non-ityhefu, ungcoliseko-free. Umgaqo kaloliwe unobuso obukhazimlayo besilivere kunye nokubukeka okuhle nge-brushed fi ...
imisebenzi yobugcisa yentsimbi yokusika i-laser
Ukucaciswa kwenombolo yeModeli CP-2T-SF009 Qedela ukuCoca / ukuBrasha Izinto ezingama-304 zentsimbi, isitayile sesilicon Ngoyilo olusikiweyo Ubugcisa obuninzi bodonga lokuhombisa ekhaya ngaphakathi, iikhabhathi, inkampu, intendelezo kunye nezipho zokufudumeza indlu. Siyila ubugcisa bentsimbi obuzisa uvuyo kunye nemincili, ubuhle ebomini bakho. Ilungele ukuhonjiswa kwekhaya, ukuhonjiswa kweofisi, ukuhonjiswa kwegumbi lokuhlala. Uhlobo olulodwa lwetayitile yensimbi uphawu: imilo egqibeleleyo inokuba yinto ekujoliso kuyo nayiphi na indawo. Zonke uhombiso eludongeni uya kuzisa eyodwa ...
Iindidi zeemveliso zentsimbi ezenziweyo
Umatshini wethu we-laser unokuvelisa imisebenzi yokusika yeepaneli. Kukho izinto ezininzi ezenziweyo ezinokulungiswa. Njengokunxiba imigangatho esezantsi, iibhokisi zethishu ezikwisikwere kunye nesimbozo; Uzifihla ngokulula iibhokisi zekhadibhodi yeethishu; Uyilo olucocekileyo, olucekeceke lulungele ukusetyenziswa kwekhaya okanye urhwebo; Ukuncoma nakuphi na ukuhonjiswa.Ubungakanani obugqithisileyo bokubamba ubukhulu beebhokisi zesikwere esikwizinga eliqhelekileyo kunye nokufumba kwee-napkin zobuso ezizimeleyo okanye izicwili.Izantsi lokuvula livumela ukutshintshwa ngokulula kweebhokisi ezingenanto zeR ...
Iintlobo Shower Umxhubi
Ulondolozo lweNdlela yokuLula ukuPhuma kwetephu
Iphaneli yokuhlamba VS Intloko yokuhlamba ngesandla
No.9 Zhongzhen Road, Luocun, Shishan Town, District Nanhai, Foshan City, kwiPhondo Guangdong, China.